သီတင်းကျွတ် ဂေဇတ်သို့ ကန်တော့ပန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » သီတင်းကျွတ် ဂေဇတ်သို့ ကန်တော့ပန်း
သီတင်းကျွတ် ဂေဇတ်သို့ ကန်တော့ပန်း
Posted by ရွှေအိမ်စည် on Oct 11, 2011 in Cultures | 19 comments
တူရာသီ( သို့ မဟုတ်)သီတင်းကျွတ်ကာလတွင်ဆီးမီးထွန်းညှိပူးဆော်ခြင်း
ပဝါရဏာ ပွဲ ဖိတ်မံတက ပြုခြင်း၊ ပူဆော်ကန်တော့ခြင်းဟာမြန်မာလူမျိုးတို့ ရဲ့ ချစ်စရာယဉ်ကျေးမှုထုံးထမ်းဓလေ့ တစ်ခုပါ။
ဘုရားရှင်က မယ်တော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ သန္တုဿိတ နတ်သားကို အဘိဓမ္မာတရား ဟောကြားတော်မူပြီး ကျေးဇူးဆပ်တယ် ဗုဒ္ဓဧ။်အဘိဓမာတရားတော်ဟောကြားပြီးမြောက်သောနေ့ ကိုပူဆော်တဲ့ အနေနဲ့ မီးထွန်းပူဆော်ကန်တောကြတယ်။ မြတ်စွာဘုရားတာဝတိံသာနတ်ပြည်ကလူပြည်ကိုရွှေဇောင်းတန်း ငွေဇောင်းတန်း ပတ္တမြားဇောင်းတန်းမှဆင်းတယ်လို့ ဘဲငယ်စဉ်ကသိခဲ့ ပါတယ်..။
သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတော်ကြီးတွေလဲ “ပဝါရဏာ ကံ” ပြုကြပါတယ်။
ပဝါရဏာ ဆိုတာက “ဖိတ်မံတက ပြုခြင်း လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ ဝါကျွတ်တဲ့ အဆုံးမှာ လုပ်တဲ့ ပွဲတစ်ပွဲလို့ ဆိုလို့ ရကောင်းပါတယ်။ရဟန်းငယ်များက ၇ဟန်ြးီ့းများကိုကန်တော့ကြ၇တယ်..။ မိမိတွင်အပစ်ကြီးငယ်၇ှိပါကခွတ်လွှတ်ပါ၇န်တောင်းပန်ကြ၇တယ်။
နယ်ပယ် အလိုက် ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ သံဃာတော်များ အားလုံး စုစည်းပြီး ဖိတ်မံသမှု ပြုရတဲ့ ပွဲပါ။ရဟန်းဖြစ်စေဦးတော့၊
အတူ ယှဉ်တွဲ ဆက်ဆံ ပေါင်းသင်းနေကြတဲ့ သံဃာသို့ မဟုတ်ကျောင်းတိုက်ထဲ က အငယ်ဆုံရဟန်းက မြင်ခြင်း၊ကြားခြင်း၊ယုံမှားသံသသယဖြစ်ခြင်း ဆိုတဲ့လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟရဲ့ အထူ အပါးအလျှောက် ပြောမှားဆိုမှားတာတွေ၊ စိတ်နှင့် ပြစ်မှားမိတာတွေက အနည်းနှင့် အများတော့ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ ဒါမှ မဟုတ်ရင်လဲ သံသယဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီလို နည်းနှင့် ကိုယ့်ထက် အသက် ဂုဏ်ဝါ ကြီးတဲ့ သူတွေကို ပြစ်မှားမိရင် ခွင့်လွှတ် ကျေအေးဖို့ တောင်းပန် ကန့်တော့ကြတာပါ။ပါဋိလိုရွှတ်ဆိုပြီး ပ၀ါရဏာပြုကြရပါတယ်။
စိတ်ထား နူးညံ့ သိမ်မွေ့တဲ့၊ ရိုးရာ အစဉ်အလာလဲ ကောင်းခဲ့၊ ထိမ်းလဲ ထိမ်းသိမ်းတဲ့ အိမ်တွေမှာဆို မိဘတွေကို မိသားစုဝင်တွေအားလုံး စုံစုံ ညီညီ လက်ဆယ်ဖြာ ထိပ်မှာမိုးလို့ ရှိခိုး ကန်တော့တဲ့ ဓလေ့ ရှိတတ်ကြတယ်။
တစ်ချို့ဆို အစ်ကိုကြီး အမကြီးတွေကိုတောင် အစဉ်လိုက် ကန့်တော့တတ်ကြသေးတယ်။ သြော် တကယ်လဲ ကြည်နူးရတဲ့ ကာလနှင့် ဓလေ့လေးပါပဲနော်။ဒီသီတင်းကျွတ်ကာလရာသီဟာမီးထွန်းခြင်းသာမဟုတ်ဘဲ…ကန်တော့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကိုဘဲလေ့ လာမိသလောက်ပါ
ဟောအခုဂေဇတ်ရွာထဲ ရောက်လာတော့..ကျမကလည်း ကိုယ်ထက်တရက်တမနက်ကြီးတဲ့ သူတွေ ကိုကန်တော့ချင်လာပါတယ်..။
ကျမ ကို မချစ်သော…
ကျမ ဘယ်လို့ မှမနေသော..ဂေဇတ်ရွာသူရွာသားအပေါင်းအပေါ်မြင်ခြင်း၊ကြားခြင်း၊ယုံမှားသံသယဖြစ်ခြင်း နှင့် အပြစ်ကိုထောက်ပြဆုံးမနိုင်ကြောင်း၊ ကျမကလည်းအပြစ်ရှိပါက ပြုပြင်ပါမည်လိုက်နာပါမည်ဖြစ်ကြောင်း။
ချစ်စရာမြန်မာ့ဓလေ့ သီးတင်းကျွတ်မှသည် ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်းစာ ဆထက်ပိုမိုတိုးတက်ပါစေရန်
အဖက်ဖက်မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါသော…သူကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ
့ဂေဇတ်မှာပါဝင်ရေးသားနေသောအဖွဲ့ သူအဖွဲ့ သားအပေါင်း…
အချင်းချင်း ညီညွတ်စွာ ရိုင်းပင်းကူညီ ဂေဇတ်အကျိုး ဆထက်သယ်ပိုးနိုင်ကြပါစေ။
စိတ်ဧ။်နှစ်ဖြာ ကျန်းမားခြင်း ချမ်းသားခြင်းပြည့်စုံကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါသည်။
မရွှေအ်ိမ်စည်ရေ ချစ်စရာကောင်းသော မြန်မာ့ဓလေ့ ၊ သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေမှာ ကျွန်မကလည်း အဖွဲ့ သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ 
ဂေဇက်မှ သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျန်းမာချမ်းသာ လန်းဖြာကြစေကြောင်း မမနဲ့ အတူဆုတောင်းမေတ္တာပို့ သအပ်ပါတယ်ရှင်။
အဲ့ ဒိအရွယ်ကအိုးတိုးအတ..ဘာလုပ်ဘာကိုင်ရမှန်းမသိ..ဘာဆုပေးရမှန်းမသိ..ကိုယ်လည်းစာသင်လို့ အိမ်ပြန်..ထမီကွင်းလုံးချွတ်ဘောင်းဘီတိုဝတ်ပြေးဆော့တြ့ အရွယ်ပေါ့….
တကယ့်တကယ်ကြုံဘူးမှသိဆိုသလို..ကိုယ့်အနေအထိုင်ကိုယ်သာသာဘဲပြန်သင်ရဘူးခဲ့ ပါရဲ ။
ကိုယ့်ဘာရှက်တတ်ရင်းနဲ့ ဘဲ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ်ထိမ်းကျောင်းမိတာ
အပြစ်ဟူသမျှ.. (ကျုပ်က.. ခွင့်လွှတ်လို့ရတာတွေ).ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ကွယ်..။
ကျုပ်က..အမှားအယွင်းတွေများလုပ်ခဲ့တာတွေရှိရင်လည်း.. ရွာကောင်းကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်တာမို့.. စေတနာကောင်းနဲ့လုပ်တယ်သဘောထားပြီး ..ခွင့်လွတ်ကြပါလို့.. ပြန်ပြောလိုပါတယ်..။
ဖွင့်ဟ၀န်ခံခြင်း.. တောင်းပန်ခြင်း..ကျေအေးခြင်းဆိုတာ.. လူသားအတွက်အင်မတန်မွန်မြတ်တဲ့..အလုပ်တခုပါလို့..။
မှားရင်တောင်းပန်ရတယ်..။ မှားတယ်ထင်ရင်..ဖွင့်ဟ ၀န်ခံရပါတယ်..။
တဖက်ကတောင်းပန်လာရင်လည်း.. ကျန်တဖက်က..(အတတ်နိုင်ဆုံး) ကျေအေးပေးရပါတယ်..။
ဖွင့်ဟ၀န်ခံသူကိုလည်း လက်ခံနားထောင်ပေးရတယ်..။ ကူညီဖြေရှင်းရတယ်..။ ဖြေလျှော့ပေးရပါတယ်.။
ဒါကို.. ခရစ်ယန်တွေ.. Confession ဆိုပြီး.. လုပ်နေခဲ့တာပါ..။
ဂေါတမဘုရားရှင်က.. ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်.. လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၅၀၀ကျော်ကတည်းက… သူတည်ထောင်တဲ့..သံဃာတော်တွေကို သေသေချာချာ လမ်းပြစည်းကမ်းချသတ်မှတ်ပေးသွားခဲ့တယ်..။
သံဃာတော်တွေ.. ၀ိနည်း.. ချိုးဖေါက်မိရင်..အာပတ်ဖြေတယ်ဆိုတာ… အဲဒါပါပဲ..။
အင်မတန် မြင့်မြတ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပြီး.. အဲဒါကို လူတွေသာလုပ်နိုင်ရင်.. လောကီရေးရာအဖြာဖြာမှာ.. အင်မတန်အေးချမ်းလာမယ်လို့ ထင်မိတာပါပဲ..။
ပြောရရင်.. အခုမြန်မာပြည်မှာ..လုပ်နေကြပုံက. လာဘ်ထိုးပွဲကြီးလိုလို….
(ဦးကိုင် အမှား အမှန်ကို ဘယ်လိုခွဲခြားပါသလဲ။)
သီတင်းကျွတ်အချိန်ကြောင့် ရှိခိုးကန့် တော့ခြင်း အလေ့ထလေးလုပ်လာတာကောင်းပေမယ့် နောက်ပိုင်း အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရည်သွန်းတာတွေ များနေတယ် ။ စိတ်ထဲက အစစ်မှန်နဲ့ ကန်တော့တာမျိုးဆိုလျှင် သီတင်းကျွတ်တစ်လထဲတင်မဟုတ်ပါဘူး နေ့တိုင်းတောင် လုပ်သင့်တာမျိုးလို့ ကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်။
ကျနော့်ရဲ့..ပြစ်ကြီး..ပြစ်ငယ်..ပြစ်လတ် အကုန်လုံးတွက် တောင်းပန်ပါ၏..
သီတင်းကျွတ်ဆိုတဲ့ အချိန်ခါရာသီကိုလိုက်ပြီး အခုတော့ လူတွေက
အကျိုးစီးပွားရှာ အမြတ်ထုတ်နေကြတာပေါ့ ။ စိတ်ထဲကသာ သန့်သန့်ရှင်း၇ှင်းနဲ့
မြန်မာ့ဓလေ့ သီတင်းကျွတ်ကို ဆင်နွဲကြမယ် ကန့်တော့ကြမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက်
သီတင်းကျွတ်မှာ ဂေဇက်မှ ရွာသူ/ ရွာသားတွေလည်း ကျန်းမာ၇ွှင်လန်းပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်နော် ……..
အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျာ ကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ….
ရွာထဲမှ လူကြီးသူမ များအားလုံးကို (ကျနော်ရောက်တာ ၂နှစ်လောက်ရှိပီဆိုတော့ )
၂နှစ်ပတ်လုံး ဝစီကံ မနောကံတွေနဲ့ ပစ်မှားမိတာ ရှိခဲ့ပါလျှင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန်
ရိုသေမြတ်နိုးလက်စုံမိုး၍ ရှိခိုးဦးခိုက် ကန်တော့လိုက်ပါတယ်ဗျာ….
သီတင်းကတော့ နှစ်တိုင်းကျွတ်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာလည်း အပြစ်ဆိုတာ အမြဲမကင်းကြပါဘူးလေ။ မနောမှာလည်း လူကြီးသူမတွေကို ခင်မင်မှုနဲ့ နောက်တာတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။ မှားတာတွေလည်း ရှိခဲ့တယ် ထင်တာပဲ။ အားလုံးပဲ ဒီနေရာလေးကနေ ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။ ဂေဇက်ကြီးလည်း သီတင်းတွေအခါခါ ကျွတ်ပြီး ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်စေဖို့ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့လိုက်ပါတယ်။
ဖတ်ရတာ သိပ်ကိုမင်္ဂလာရှိတဲ. မြန်မာတို.၇ဲ.ယဉ်ကျေးမှုအငွေ့အသက်ကို ခံစားမိလိုက်ရတယ်။ ဂေဇက် ဒီထက်မက တိုင်းပြည်အကျိုး လူမျိုးအကျိုးကို မီဒီယာအားနဲ. ဆထက်တစ်ပိုး အကျိုးပြုနိုင်ပါစေ။ ကဲ..အားလုံး ဒီထက်မက စည်းလုံးချစ်ခင်နိုင်ပါစေ။
ဘလက်ချော တူမတွေ ကန်တော့ရင် ဘလက်ချော ဆုတစ်ခုပဲပေးပါတယ်။
“လင်ကောင်းသားကောင်း ရပါစေ” လို့။
ဒါပေမယ့် ရွှေအိမ်စည်က ကျွန်တော်နဲ့ ရေးလိုက် ကျွန်မနဲ့ရေးလိုက်ဆိုတော့
သူကြီး လည်း နာမည်တတ်ပြီး စော်ကားမိသလို ဖြစ်တာရှိရင်
ခွင့်လွှတ်ပါလို့ လေးလေးစားစား တောင်းပန်ပါတယ် သူကြီး ခေါ် kai ခင်ဗျား။
“လင်ကောင်းသားကောင်း ရပါစေ”ဆိုတဲ့ ဆု..ဒီဆုအရေးကြီးတယ်..ငယ်ငယ်က(အရွယ်လေးရင်ခုန်စပြုတုံးက)
လူကြီးတွေ ကန်တော့လို့ (အဲ့ သလိုဆုမပေးရင်…..လိုနေသေးတယ်…နော်ဆိုပြီးသတိပေးတတ်တယ်)အခုထိဆိုပါတော့..မျက်နှာတော့ပြောင်တယ်နော်…။
တကယ်တော့ဒါဟာ…အရေးကြီးပါတယ်..မမြင်ရတြ့ အိမ်ထောင်ရေးကံ ကအရေးကြီးဆုံးဘဲ
တောင်းပန်ပါရဲ့ ..ကျမဆိုတဲ့ အသုံးအနှုံးမယဉ်ပါးခဲ့ ဘူး..ကိုယ်တိုင်လည်းမနှစ်သက်တာပါပါတယ်….
ကျမလည်း ရွာရဲ့ သက်ကြီးဝါ ကြီး ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမများ၊ မောင်ငယ်ညီမငယ်လေးများနဲ့ အထူးသဖြင့် သူကြီးကို ပြောမှားဆိုမှားရေးမှားတာ များရှိခဲ့ရင် ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ချင်ပါတယ်..
သီတင်းကျွတ်… အခါသမယကိုလည်း စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြင့် ဖြတ်ကျော်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်..
(.facebookမှာတော့..မုန့် ဘိုးလိုက်တောင်းတာပါဘဲ…ဆရာသမားတွေ ကိုပါ။။။။။။)
နေပြန်ကောင်းတဲ့ နေ့ ရဲ့ ပထမဆုံးပိုစ့်ပါဘဲ…..
ဂေဇတ်ကမိသားစုဝင်များနေ့ တိုင်းရက်တိုင်းမင်္ဂလာရှိသောနေ့ ရက်များပိုင်ဆိုင်ကြပါစေ
(အဲဒီ စာသားတွေကို အရမ်းကြိုက်ပါတယ်)
ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရတဲ့ ကဗျာလေးတပုဒ်
အင်မတန်မှ မင်္ဂလာ့မင်္ဂလာပြည့်စုံပါသော သီတင်းကျွတ်လို့
မန္တလေး ဂဇက်မှာရေးခဲ့ကြသော ပိုစ်များအနက် တချို့သောပိုစ်များမှာ
ကျွန်တော် မှော်ဆရာအား အသိပညာ အတတ်ပညာများ သိစေ တတ်စေခဲ့ပါသည်။
ထိုပိုစ်များကို ရေးသားခဲ့သူများအား ကျွန်တော်၏ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ အဖြစ်သတ်မှတ်၍
ဤ နေရာမှနေ၍ ကန်တော့ပန်းဆင်အပ်ပါကြောင်း …….